अर्थमन्त्रीले भने,‘भूकम्पपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन’ « मेचीखबर
अर्थमन्त्रीले भने,‘भूकम्पपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन’
२५ जेष्ठ २०७२, सोमबार ०९:३१ मेचीखबर
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भूकम्पले घरबारविहीन बनेका र परिवार गुमाएका व्यक्तिलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बताएका छन् । संसद्को अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले भूकम्पले ध्वस्त बनाएका घर बनाउन पनि सरकारले नसक्ने बताएका छन् ।
‘भूकम्पले ८ हाजरभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ, लाखौं घर ध्वस्त भएका छन्, यस्तो अवस्थामा सरकारे हरेक व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिन र घर बनाउन कसरी सक्छ ?’ डा. महतले भने,‘अन्य मुलुकले पनि क्षतिपूर्ति दिएका छैनन, हामी पनि दिन सक्दैनौं ।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार १२ र २९ वैशाखको भूकम्पबाट ८ हजार ७ सय १२ जनाको मृत्यु र २२ हजार २ सय २० जना घाइते भएका छन् । २ हजार ६ सय ३८ सरकारी भवन ध्वस्त र ३ हजार ३ सय ३९ भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यसैगरी भूकम्पले पाँच लाख ५ हजार ५ सय ७७ निजी घरमा क्षति पुर्याएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।